တောကထွေးညို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တောကထွေးညို
Posted by ေမာင္ ေပ on May 9, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Short Story | 18 comments
မိုးကလေးက စိုတိုတိုရုံတင်မက (တင်မက လို့ဖင်က လားလို ့ကျွန်ုပ်အား လာမမေးကြပါနှင့် ၊ နှာအထူးကျွမ်းကျင်သူ ရွာသား “ မိုပိုင်း ” ဆိုသူအား သွားရောက်မေးကြပါရန်) …….
ဝုန်းဒိုင်းနဲ့၊ မိုးသီးကြီးတွေ မိုးသီးလေးတွေ မိုးသီးဇွန်တွေပါ ပါလာတော့
မန်းတလေးမြို ့မှာ သစ်ပင်တွေ၊ ဓါတ်တိုင်တွေ ၊ ကြေညာဘုတ်တွေ ပါ မြေခကြရကုန်ရှာပေါ့လား ။
အဲ့ချိန်မှာ ကံထူးရှင် ကျွန်ုပ် မောင်ပေ မှာ ရန်ကုန်-မန်းတလေး အမြန်လမ်းမကြီး တွင် စူပါကပ်စတမ်ကားပေါ်နှိုက် ထန်းရည်လေးသောက်ရင်း ပဲကြီးလှော်လေးဝါးရင်း ၊ ထွေးညိုဘူးလေးကို ရင်မှာပိုက်ကာ ဇိမ်ကြခဲ့လေသည် တမုံ ့။
လမ်းခရီးဘေးတွင် ကျွန်ုပ် တို့ထန်းရည် ပါဆယ်ဝင်ဆွဲနေကြ ထန်းတဲလေးရှိသည် ။ ခါတိုင်းခရီးတွေတုန်းကတော့ ထန်းတဲပိုင်ရှင် ကို ဘာမှ ထွေထူးမေးမြန်းမနေပဲ ၊ ထန်းရည်သာ ဝယ်ခဲ့ရာမှ ၊ ယနေ ့မူ ၊ တခြား ဘာရသေးလဲ ဟု မေးကြည့်မိတော့
တောလဲ ရပါတယ် ဆရာကြီးတဲ့ ။
ကျွန်ုပ် မောင်ပေ သည် စကော့စမ်းရေနှင့် ချက်သော ဝီစကီ ကို ရံဖန်ရံခါ မှီဝဲလေ့ ရှိသော်လဲ ၊ ကိုယ့်အမျိုးသားချင်းအားပေးသည့်အနေဖြင့်သော်လီကောင်း ( လီကောင်း = ခရက်ဒစ်တူ ကိုအောင်ပု ) ကျွန်ုပ် ကိုယ်နှိုက်ကိုယ်က ကြိုက်နှစ်သက်ရွေ ့သော်လီကောင်း ၊ ထွေးညို အစစ်ရလျှင် သောက်လေ့ ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်နှင့် ခရီးသွားဖော်များကို ထွေးညို ယူဦးမလား မေးတော့ ၊ ဟင့်အင်းတဲ့ ၊ ထန်းရည်ပဲ ကောင်းတယ်တဲ့ ။
ဒါတောင် ထန်းတဲပိုင် က အမြည်းအဖြစ် ထွေးညို တစ်ခွက် လာချပေးသေးသည် ။
မည်သူမှ မသောက်ကြ ။
ထွေးညိုကလေးက နောက်မနေပဲ ၊ ကြည်တည်တည်လေးမို့၊ ထိုအမြည်းခွက် ကို ကျွန်ုပ် ကောက်သောက်လိုက်ရာ ၊ ချိုတိုတိုလေး ပူပြီးဆင်းသွားတာ… ဟက်ထိရ၏ ။
လျှာဖျားမှ လည်ချောင်း ၊ နောက် အစာအိမ် သို ့ပူဆင်းရောက်ရှိသွားသော အရသာ ထူးကဲလွန်းသည့် အရက်ကို ကျွန်ုပ် အဘယ်မှာလျှင် မျက်နှာလွှဲနိုင်တော့မည်နည်း ။
ကျွန်ုပ်လဲ ဘာမှ မပြောတော့ပဲ ၊ ကိုယ်ဝယ်သော ဘူးကိုသာ အသာပိုက်ယူလာခဲ့၏ ။
မန်းတလေး ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ၊ ခေတ္တခဏ အိပ်စက်ပြီးသကာလ ၊ ထမင်းစားရန်အလို ့ငှါ ၊ သောက်တော်ထွေးညိုဘူးကလေးဖြင့် ထွက်လာမိခဲ့သည် ။
မိုးကား ထပ်ရွာချေ၏ ။
ခရီးသွားဖော် ဆရာသမားနှစ်ပါးဆီ ရောက်သောအခါ ၊ ဘာဟင်းနှင့် နှိပ်ကြမည်နည်း ဆိုတော့…
မြန်မာထမင်းဟင်း နဲ ့ဝီစကီ ၂ပက်လောက် ချချင်သတဲ့ ။
ထို ့နောက် မြန်မာထမင်းဆိုင်ဆီပေါ့ ။
ဆိုင်ရောက်တော့ ၊ သူရို ့အရက်မမှာခင်လေး…
ဆရာတို ့ရေ ၊ ဒါလေး အရင် နဲနဲလောက် မြည်းကြည့်စမ်းပါ လို့ပြောရင်း တစ်ခွက် တိုက်လိုက်ရာ
“““ အားပါးပါး… ကောင်းလှချီလားကွ ၊ ဒီလိုမှန်းသိ ငါတို ့လဲ ဝယ်ပါတယ်ကွာ ၊ ဒီမယ်… မင်း ဘူးကို ဒီမှာတင် အပြတ်ဖြတ်ရအောင် ””” တဲ့
““ ဘယ်ရလိမ့်မလဲ ဆရာ ၊ ဟိုမှာတုန်းက ကျွန်တော် ပြောသားပဲ ၊ ဝယ်ပါဆိုတော့ ၊ ဘာဖြစ်သလေး ၊ ညာဖြစ်သလေးနဲ့၊ ၂ပက်စာထက်တော့ ပိုမပေးနိုင်ဘူး ခင်ဗျ ””
သို ့နှင့် ဆရာသမားတွေလဲ သူရို ့စကားနှင့် သူရို ့ပိတ်မိနေတော့ ၊ တစ်ယောက် ၂ပက်ကျော်စီမျှနှင့် တင်းတိမ်သွားကြကုန်ရှာသည် ။
ကျွန်ုပ်လဲ ထမင်းမစားခင် ထွေးညိုကလေး ၂ပက်ခန် ့ကို နိစ် ကစ်လိုက်ရာ ၊ လွန်စွာမှ ထမင်းစားလို ့မြိန်ရေရှက်ရေ ရှိတာကလား ။
စားကောင်း သောက်ကောင်းရင်း ဦးစွာ တွေးမိသည်မှာ…
ဂေဇက်ရှိ သောက်တတ်သူ ညီအစ်ကိုများအား ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်တူတူ ထွေးညိုဆွဲစေချင်သည့် ဆန္ဒ ပြင်းပျစွာ ပေါက်ဖွားလာသည် ။
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ။ လက်ကျန် ထွေးညိုလေးသွားမကစ်ခင် ၊ ရွာထဲက မိတ်ဆွေများကို သတိရလို့၊ ရေးလိုက်တာပါ ။ ဘာမှ အရေမရ အဖတ်မရ ဖြစ်ခဲ့ရင် ဝန္ဒာမိ ပါဗျား ။
******* အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် *******
ထွေးညိုနဲ့ အမဲကြော်ဆို… အို ဘာကိုလိုပါ့လို့မေးလိုက်ချင်ရဲ့…
အ ဟဲ… သတိတော့ထားဆရာ…
ကျုပ်တို့ရွာက ထွေးညိုနဲ့ ပေးတွေ့ချင်တယ်….
ထွေးညို အတူဆွဲချင်လိုက်တာ လေးပေရေ..
ထွေးညိုနဲ ့ဆို… ကြွက်ကြော်လေးနဲ ့…ဖျာကြမ်းလေးမှာထိုင်ပြီး..ဟေးလားဝါးလား…မြည်းလိုက်ချင်တာ။
လေးပေရဲ ့… ကွမ်းပိုစ့်တွေကိုလည်း..လွမ်းနေတာကြာပေါ့ ။ အခုတော့အလွမ်းပြေဖို့ထွေးညိုနဲ့ အတူ
အနှုတ် ( 10 )
တောက်စ်.. မြင်သာမြင် မကြင်ရ.. မိထွေးညို အလှ
ကျုပ် ကြားဖူးတာ ပြောရရင်
ထွေးညိုလေးရယ် သေးဆိုတာ မတ်တပ် ပေါက်ရတယ်
ခင်ဗျား ထွေးညို ကရော ဒီလိုမျိုးလား
ကျုပ် တကယ် ပြောချင်တာကတော့
ခင်ဗျားကို ကျုပ်တို့ရွာက ထွေးညိုနဲ့
ကျုပ်ကတော့ ရွှေကူက ကချင်ဦးရည် ကိုအကြိုက်ဆုံး ၊
တစ်ဂါလံ ဝယ်လာတာ ကုန်မှာစိုးလို့ မျှင်းပြီးသောက်နေရတယ် ၊
ပူတာအိုက ဆေးမြစ်တွေပါ စိမ်ထားလို့ အိုး ဂွတ် မှ ဂွတ်
ကျုပ်ရေနံချောင်းမှာနေတုံးက သောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးဘရှင်ရဲ့
အဲ သူ့ ထွေးညို ကြီးက ကြည်လှချည်လားတော့ ..
ကျူပ်တို့သောက်တဲ့ထွေးညို ကတာ့ ခပ်နောက်နောက်ရယ် ..
တကယ်ကတော့. .အရက်က.. ပလပ်စတစ်ဗူး ..ခွက်ထဲ.. မထည့်ကောင်းဘူးဗျ…
ထွေးညိုက ကော်ရေပုလင်း နဲ့ မလိုက်ဖက်ဖူးဗျ။
ဖန် ငှက်ပျောဖူး ပုလင်း ကို ငှက်ပျောဖက်ခြောက် ကို အဆို့ လုပ်ထားတာ မှ လိုက်ဖက်တာ လား။
ကျုပ် ပို ့စ်ကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသွားသူ အားလုံးနဲ ့၊ ကွန်မင့်များဖြင့် အားပေးသွားတဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ ။
အရက် ကို ပလက်စတစ်နဲ ့ထည့်ရင် မကောင်းတာမှန်ပေမယ့်လဲ
တောနယ်အရပ် ဆိုတော့က ၊ အခုလို ရေသန် ့ဘူး နဲ ့ထည့်ဖို ့ရာတောင် ၊ ရေသန် ့ဘူး ခွံ ကို တစ်ဘူး ၅ဝကျပ် ပေးထည့်ရပါတယ်ဗျား ။
ငှက်ပျောဖူးပုလင်းခွံ မှာလဲ လွန်စွာ ရှားနေပါပြီ ခင်ဗျား
အဲ့ ထွေးညိုဆိုတာကို မသိလို့… တကယ်ပြောတာ…ဘာပြောတာလဲဟင်…တောအရက်ကိုပြောတာလား…
သောက်တော်ဗူးရယ်နဲ့ အို….မကွာ အို…မကွာ
ကပေရေ့ …..သောက်တော်ဗူးရယ်နဲ့ အို…. မကွာ …… ဘာတဲ့ဒုန်း…..။
အရက် ဆိုတဲ့ L ကိုဟောက ကော်ပုလင်းတင်မဟုတ်ဘူးဗျ …..။ ဒန်အိုး ဒန်ခွက် ဒန်ဖလား စတာတွေနဲ့လည်း ထည့်မထားသင့် မသောက်သင့်ပါဘူး ….။ တစ်ချို့ တောရွာတွေမှာ မသိလို့ ထည့်ထား ထည့်သောက်ကြတယ်….။ အဆိပ်သင့်တယ် ရောဂါတွေများတယ်…။ ပြီးတော့ သတိထားရမှာက ဆေးလိပ်ပြာ ….။ အရက်သောက်တတ်တဲ့သူတော်တော်များများက ဆေးလိပ်လည်းသောက်တတ်တယ် …။ နေဝန်းနီတို့ဆို အရက်မြည်းစရာ အထူးမရှာဘူး ….။ ဆေးပေါ့လိပ်တို တစိတိုရှိရင်ရတယ်…။ ဆိုတော့ကာ အရက်သောက်နေရင်း ဆေးလိပ်ပြာက အရက်ခွက်ထားကြွေကျသွားရင် အဲဒိအရက်ခွက် ဆက်မသောက်ပဲသွန်ပစ်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ…..။ အဆိုးဆုံးက စီးကရက်ပြာ ….။ အမူးဒီဂရီ ထိန်းမရအောင်တက်တတ်တယ် ….။